Miala ny sekretera jeneraly lefitry ny UNWTO: i Gustavo Santo avy any Arzantina aorian'izany?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miala ny sekretera jeneraly lefitry ny UNWTO: i Gustavo Santo avy any Arzantina aorian'izany?
Hisy cocktail fanaovam-beloma fanaovam-beloma anio ao amin'ny UNWTO Madrid hanao veloma ny sekretera jeneraly lefitra UNWTO Andriamatoa Jaime Alberto Cabal Sanclemente of Kolombia. Voatendry izy Sekretera lefitra-Jeneralin'ny ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO) amin'ny Jona 2018 sy dnatahotra ny handao ny fikambanana afaka herintaona monja. Ny kinova ofisialy dia, Andriamatoa Sancelmente dia hiditra amin'ny indostrian'ny fizahantany tsy miankina.
Tsy fantatra mazava izay ho mpandimby azy vonona hiara-hiasa amin'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili, fa raha ny loharanom-baovao marim-pototra kosa, Hon. Gustavo Santos, minisitry ny fizahantany any Arzantina dia mety tsara. Talohan'ny naha minisitra azy tamin'ny taona 2015 dia profesora izy ny literatiora ao amin'ny oniversite nasionalin'i Cordoba
Gustavo Santo, minisitry ny fizahantany Arzantina
Nanomboka ny asany tamin'ny asany ampahibemaso izy ho talen'ny tanora ao amin'ny faritaniny.
Izy dia mpikambana ao amin'ny lahatahiry Improtur, sekretera jeneralin'ny Filan-kevitry ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ary mpikambana ao amin'ny komity siantifika ao amin'ny UNWTO.
Tsy miteny afa-tsy espaniola ny minisitra raha ny loharanom-baovao.
Ny minisitry ny fizahan-tany any Arzantina Gustavo Santos, tamin'ny taon-dasa no filohan'ny filankevitra mpanatanteraka UNWTO. Nilaza izy fa “ny fanavaozana sy ny fizahan-tany dia mpiray dina amin'ny famoahana fotoana iainana ho an'ny olontsika sy famoronana asa. Izany dia manamafy ny fahavononantsika sy ny andraikitsika manoloana ity sehatra ity, izay hitarika ny fivoaran'ny zanak'olombelona amin'ny taona ho avy. "
Tamin'ny volana desambra ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO) dia nanome ny fanohanany tamin'ny fitokanana tany Arzantina ny foibe manokana fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany any Amerika - Unidigital.
Rehefa mitsidika ity toeram-pialantsasatra any Espana ity dia jereo ny fisotroanao